Methylprednisolone အမှုန့် (83-43-2) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Methylprednisolone အမှုန့်
SKU: 83-43-2. အမျိုးအစား: ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Methylprednisolone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (83-43-2) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Methylprednisolone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Methylprednisolone အမှုန့်
ကာယဗလသံသရာအတွက် Methylprednisolone အမှုန့်
ဓာတုအမည်များ: Methylprednisolone အမှုန့်, Medrol, Medrol Dosepak, Methylpred-DP
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Methylprednisolone အမှုန့်, Solu-Medrol အမှုန့်, Depo-Medrol အမှုန့်, 83-43-2
MEDROL tablet များကိုတစ်ဦး glucocorticoid ဖြစ်သော Methylprednisolone အမှုန့်ဆံ့။ Glucocorticoids အလွယ်တကူအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကနေစုပ်ယူထားတဲ့ adrenocortical steroids, နှစ်ဦးစလုံးသည်သဘာဝဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဒြပ်ဖြစ်ကြသည်။ Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, အနံ့, လက်တွေ့ကျကျအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်တစ်အဖြူအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ dioxane ၌၎င်း, Methanol အတွက်, အရက်ထဲမှာ acetone ၌၎င်း, chloroform အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နှင့်အီအတွက်အလွန်အနည်းငယ်တွင်ပျော်ဝင်နေသောစပါးအနည်းငယ်သာပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် water.Each MEDROL (Methylprednisolone အမှုန့်) Tablet ကိုအတွက်လက်တွေ့ကျကျသည်အရည်ပျော်2မီလီဂရမ်,4မီလီဂရမ်, 8 မီလီဂရမ်, 16 မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် 32 မီလီဂရမ် Methylprednisolone ၏အမှုန့်ပါရှိသည်။
သင့်ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားအဖြစ်များသောအားဖြင့်အစားအစာသို့မဟုတ်နို့နှင့်အတူ, နှုတ်ဖြင့် Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပါ။ ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ထိုးညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။ ကုသမှု၏သောက်သုံးသောနှင့်အရှည်သည်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများကိုအချိန်ဇယားဒီဆေးဘို့တည်ရှိ။ သငျသညျအသီးအသီးနေ့ကအတူတူထိုးတာမဟုတ်ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်သင်သည်အခြားနေ့ကဒီဆေးကိုယူလျှင်, တကသတိပေးမှုနှင့်အတူသင်၏ပြက္ခဒိန်အထိမ်းအမှတ်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Methylprednisolone အမှုန့်ထိုးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏသို့မဟုတ်သတ်မှတ်အချိန်ထက်ပိုကြာအဘို့ဤမူးယစ်ဆေးမသုံးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အခွအေနေဆိုပိုမြန်တိုးတက်စေမည်မဟုတ်, နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသင့်ရဲ့အန္တရာယ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကနဦး Medrol သောက်သုံးသော (Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သောက်သုံးသော)4ထံမှကွဲပြားစေခြင်းငှါကုသခံနေရသည့်တိကျသောရောဂါ entity ပေါ် မူတည်. တစ်နေ့လျှင် Methylprednisolone မှုန့်မီလီဂရမ် 48 မှ MG ။ ပိုမိုမြင့်မားမရွေးလူနာအတွက်ကနဦးဆေးများလိုအပ်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဒီထက်ပြင်းထန်မှု၏အခြေအနေများတွင်အနိမ့်ဆေးများယေဘုယျအားဖြင့်လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကျေနပ်တုံ့ပြန်မှုမှတ်ချက်ချနေသည်အထိကနဦးသောက်သုံးသောထိန်းသိမ်းထားသို့မဟုတ်ချိန်ညှိရပါမည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကာလအပြီးကျေနပ်လက်တွေ့တုန့်ပြန်နေတဲ့မရှိခြင်းလည်းမရှိလြှငျ, MEDROL (Methylprednisolone အမှုန့်) ရပ်စဲထားရမည်နှင့်လူနာသည်အခြားသင့်လျော်သောကုထုံးမှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
သောက်သုံးသောလိုအပ်ချက်များကို variabale ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရပါမည်နှင့်ကုသမှုအောက်မှာရောဂါနှင့်လူနာများ၏တုံ့ပြန်မှုများပေါ်အခြေခံ individualized ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်. တစ်ဦးအဆင်သင့်တုံ့ပြန်မှုမှတ်ချက်ချနေသည်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသောက်သုံးသောတစ်ဦးလုံလောက်သောလက်တွေ့တုန့်ပြန်ထိန်းသိမ်းရန်တံ့သောနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောရောက်ရှိသည်အထိသင့်လျော်သည့်အချိန်ကြားကာလမှာသေးငယ်တဲ့လျှော့အတွက်ကနဦးမူးယစ်ဆေးသောက်သုံးသောလျော့ကျလာကဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမူးယစ်ဆေးသောက်သုံးသောဖို့ကိစ်စတှငျလိုအပျကွောငျးစိတျထဲမှာသိုထားရပါမည်။ ရောဂါဖြစ်စဉ်တွင်လွှတ်သို့မဟုတ် exacerbations မှအလယ်တန်းလက်တွေ့အနေအထားကိုအတွက်အပြောင်းအလဲလူနာရဲ့တစ်ဦးချင်းမူးယစ်ဆေးတုန့်ပြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကုသမှုအောက်မှာရောဂါ entity နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများမှလူနာထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသောက်သုံးသောချိန်ညှိလိုအပ်သောစေသောအခြေအနေများတွင်ရှိပါဝင်သည်; ဒီအဆုံးစွန်သောအခြေအနေ၌ကလူနာရဲ့အခြေအနေနှင့်အတူတသမတ်တည်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအဘို့အ MEDROL (Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်) ၏သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ရေရှည်ကုထုံးပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရပ်တန့်ထားရန်ဖြစ်လျှင်, အဲဒါကိုတဖြည်းဖြည်းမဟုတ်ဘဲရုတ်တရက်ထက်ဆုတ်ခွာစေအကြံပြုသည်။
သငျသညျ Methylprednisolone အမှုန့်, Aspirin, tartrazine (အချို့လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးအတွက်အဝါရောင်ဆိုးဆေး), သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှမတည့်လျှင် 1) သင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြပါ။
2), ထိုကဲ့သို့သော warfarin (Coumadin), အဆစ်ဆေးဝါးများ, Aspirin, azithromycin (Zithromax), clarithromycin (Biaxin), cyclosporine (Neoral အဖြစ်အထူးသဖြင့် anticoagulants ( 'အသှေးကိုပိုမိုပါးလွှာ') သငျသညျကိုယူပြီးနေကြတယ်ဆိုတာကိုညွှန်းများနှင့် nonprescription ဆေးဝါးများသင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးပြောပြ Sandimmune), digoxin (Lanoxin), Diuretics ဆီး ( 'ရေဆေးပြား'), erythromycin, အီစထိုဂျင် (Premarin), ketoconazole (Nizoral), ပါးစပ် contraceptives, phenobarbital, phenytoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), theophylline (Theo-Dur), နှင့်ဗီတာမင်။
3) သငျ့အရေပြားပေါ်မှာထက်အခြားတစ်ဖန်းဂတ်စ်ပိုးကူးစက်မှု () ရှိသည်ဆိုပါက, သင့်ဆရာဝန်စကားပြောမပါဘဲ Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူကြပါဘူး။
သငျသညျရှိသည်သို့မဟုတ်ကာလအစဉ်အမြဲအသည်း, ကျောက်ကပ်, အူလမ်းကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်နှလုံးရောဂါရှိခဲ့တယ်လျှင် 4) သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြ; ဆီးချိုရောဂါ; တစ်ဦး underactive သိုင်းရွိုက်ဂလင်း; မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား; စိတ်ရောဂါ; myasthenia gravis; အရိုးပွရောဂါ; ရေယုန်မျက်စိရောဂါကူးစက်; သိမ်းယူမှု; (တီဘီ); သို့မဟုတ်အနာ။
5) သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်, သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာရန်စီစဉ်, ဒါမှမဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ-နို့တိုက်ကျွေးကြသည်။ Methylprednisolone အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
6) သင်သွားခွဲစိတ်အပါအဝင်ခွဲစိတ်ကုသမှုရှိခြင်းလျှင်, သင် Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်သို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးစဉ် 7) သင်အနာတစ်ခုသမိုင်းရှိသည်သို့မဟုတ် Aspirin ကိုသို့မဟုတ်အခြားအဆစ်ဆေးဝါးများ၏ကြီးမားသောဆေးများကိုယူလျှင်, အရက်ယမကာသင့်ရဲ့စားသုံးမှုကန့်သတ်။ Methylprednisolone အမှုန့်အရက်, Aspirin, အခြို့အဆစ်ဆေး၏နာကျင်ကျိန်းစပ်သက်ရောက်မှုရန်သင့်အစာအိမ်နှင့်အူပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်စေသည်။ ဒီအကြိုးသကျရောအနာသင့်ရဲ့စွန့်စားမှုတိုးပွားစေပါသည်။
Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် glucocorticoids ကိုခေါ်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလူတန်းစားကပိုင်ဆိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကလူတန်းစားအလားတူလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်သောဆေးဝါးများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေမကြာခဏအလားတူအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်။
Methylprednisolone အမှုန့်ရောင်ရမ်းလျော့ကျလာနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေနေကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းလျော့နည်းစေသည်။
Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ prompt ကိုဖိနှိပ်မှုအောင်မြင်ရန်အသုံးပြုသည်။ Methylprednisolone အမှုန့်ကိုအသုံးပြုသည်အရာအဘို့ရောင်ရမ်းအခြေအနေများ၏ဥပမာများပါဝင်သည်:
-acute gouty အဆစ်,
-ulcerative colitis နှင့်
သမားရိုးကျကုသမှုပျက်ကွက်ကြောင်းပြင်းထန်မတည့်သောအခြေအနေများလည်း Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ဥပမာများပါဝင်သည်:
, herpetiformis -dermatitis
-severe psoriasis နှင့်
seborrheic dermatitis ကို -severe ။
မျက်စိကို၏ uvea, မျက်ဝန်း, conjunctiva နှင့် optic အာရုံကြောများနာတာရှည်မတည့်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းသောအခြေအနေများလည်း Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နဲ့ကုသကြပါတယ်။
6 ။ Methylprednisolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
AASraw ထံမှ Methylprednisolone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို